Weellisaa Daadhii Galaan: Dhukaasa gammachuuf dhuka’u keessa lubbuu dhabe - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWeellisaa Daadhii Galaan: Dhukaasa gammachuuf dhuka’u keessa lubbuu dhabe
Artist Daadhii Galaan sirboota ‘Roorroo Jibbine’ fi ‘Gaaffin Qaba? jedhamaniin gurra horateera
(bbc)—Weellisaa Daadhii Galaan eebba hoteelaa irratti dhukaasa gammachuuf dhukaafame keessa ajjeefame.
Ajajaan poolisii aanaa Liiban Cuqqaalaa Itti aanaa Insipeektaraa Girmaa Miidhaksaa BCCtti akka himanitti, reeffi artistichaa yeroo ammaa qorannoof gara hospitaala Phaawuloositti ergameera.
Kaleessa halkan sagantaa eebba hoteelaa bakka Ashuffee jedhamutti sirbaaf kan deeme artistichi, garaa isaarra akka dhahames himan.
Aanichatti yeroo gaddaa fi gammachuu dhukaasni aadefamaa akka dhufeefii sababa kanaanis rakkoon akkanaa yeroo baayyee uumamaa jiraachuu himan.
Weellisaa osoo hin leellifamiin du’aan boqote
”Osoo rasaasaanuu nadura dhaabbatanii yaada kiyya hin jijjiiru”
Artistichaan alatti sababa dhukaasa kanaatin namni biraa miidhame hin jiru.
Artiist Daadhitu weellistoota biroo fuudhee gara hoteelichaatti deemee ture jedhan.
Gochi kuni itti yaadamee akka hin taaneefi gammachuu guddaarraa gara gadda cimaatti kan jijjiiredhas jedhan.
Sababa fageenya bakki rakkoon kuni itti uumame magaalarraa qabuun artisti Daadhii battala mana yaalaatiin gahanii lubbuusaa baraaruun hin danda’amne.
Namni rakkoo kana uumes poolisiin qoratee seeratti dhiheessuuf hojjechaa akka jiru itti aanaa inispeektaraa Girmaan himaniiru.
Weellisaa fi barreessaa Tufaa Wadaajoo sirna eebbaa Giroosarii waliigalaa Ashuffee jedhamu kanaa weellisaa Daadhii Galaan kan qabate akka ta’e himee, qophii guyyoota sadiif isa affeeree waliin deemuu hime
Qophiiin kun guyyaan xumuraa kaleessa ture kan nuun jedhe Weellisaa Tufaan, ”xinnaa guddaan hidhannoo waan qabuuf sirba tokkotti yoo xinnaate rasaasa 50-60tu dhuka’aa ture,” jedha.
”Halkan gara naannoo sa’aa shanitti Daadhiin affeeramee weellisee, sana booda sirna ture karaa mana foddaarraan osoo hordofuu dhukaasa haalaan ho’e keessa rasaasni akkamiin gara isaa akka deeme hin beekne laphee jala rukute.”
Sirna tureen miira gammachuu keessa ta’ee waltajjiirratti waan ta’aa jiru hordofaa tures jedha waltajjicha gaggeessaa kan ture Weellisaa Tufaan.
”Haalli itti rukutame itti yaadameetuma garasaatti dhukaafame fakkaata,” jedha Tufaan.
Akkuma rukutameen namni naannoo sanii yoo baqatu kaan isa fuudhanii deeman. Lubbuun isaa darbuu booda barre jedha Tufaan.
Daadhiin rukutamuu isaan dura dhukaasni akkaan baayyatee jennaan” of eggadhu rasaani si rukuta si ajjesu naan jechaa ture,” jedha.
”Weellistuu Galaanee Bulbulaa nu waliin argamtuun ammoo maaf akkas sodaatta rasaasa sodaattuu wayii jechaanii tures,” jechuun haala ture yaadata.
Daadhiin artiistii hojii isaaf aarsaa kaffaluudha, hanga ammaatti kitaaboota afur barreesseera halka hanga sa’aa sagaliifi kudhaniitti ta’ee dubbisas jedha.
Nama aartii jireenya isaa injifachuuf tattaafatuufi aartistota biroof fakkeenya ta’uu danda’uudha jedha weellisaa Tufaan waayee Weellisaa Daadhii yoo dubbatu.